Iziphequluli eziyi-13 ezihamba phambili ze-Mac, yisiphi isiphequluli esihle kunazo zonke? | Ngivela kwa-mac
UJoseph Alfocea | | I-Mac OS X, Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
Ngabe ufuna i- isiphequluli esihle kakhulu se-Mac? Njengamanje emakethe singathola inqwaba yeziphequluli ezihambisana ne-OS X. Abasebenzisi abaningi basebenzisa iSafari ngoba iza ifakiwe ngokwendabuko futhi iyona enikeza ukuhlanganiswa okuhle kakhulu nohlelo lonke. Noma kunjalo, kusekhona ingxenye enkulu yabasebenzisi abazonda iSafari ngezinga elifanayo nabasebenzisi beWindows abahlupha i-Internet Explorer, ngakho-ke sikunikeza uhlu Iziphequluli eziyi-10 eziphezulu ze-Mac.
Emakethe singathola inani elikhulu leziphequluli ezenzelwe ukusebenza nohlelo lokusebenza lwe-Apple's desktop, yize inani lazo lincane, kunjalo uma siyiqhathanisa nenani leziphequluli ezihambisana neWindows. Kepha noma kunjalo, kule ndatshana sizokukhombisa iziphequluli ezihamba phambili zeMac ezizosebenza njengezinye zeziphequluli ezaziwa kakhulu njengeSafari, Firefox, Chrome, Opera ...
Ngenza lolu hlu lweziphequluli ezihamba phambili ze-Mac ne-OS X ngibheka engikukhethayo futhi ngizama ukukwenza chaza izizathu okuholele ekutheni ngizihlukanise ngokulandelana. Siyethemba ukuthi ngemuva kokufunda okuthunyelwe ungakhetha isiphequluli esihle kakhulu se-Mac noma esivumelana kangcono nezidingo zakho.
1 I-Safari, isiphequluli esihle kakhulu se-Mac sabaningi
7 Isiphequluli seTorch
9 I-Yandex Isiphequluli
10 Isiphequluli se-Sleipnir
12 I-Rockmelt, isiphequluli semidiya yokuxhumana nabantu
I-Safari, isiphequluli esihle kakhulu se-Mac sabaningi
Ngokwami, uma futhi ungumsebenzisi we-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch, iSafari yisiphequluli esihle kakhulu se-Mac ongasisebenzisa. Ukuvumelanisa phakathi kwamadivayisi ahambisanayo i-akhawunti efanayo ivumela ukuthi sithinte amabhukumaka futhi nomlando we-MAC yethu kunoma iyiphi i-iPhone, i-iPad noma i-iPod Touch. Ngaphezu kwalokho, ukuvumelanisa okhiye namagama abasebenzisi ngokusebenzisa i-iCloud Keychain kwenza kube inketho ephephe futhi elula kunazo zonke yokuba nayo yonke idatha yethu lapho sikhona.
Unezinkinga ngokuxhumeka kwe-Bluetooth kwe-Mac yakho?
ISafari isebenza ngokushesha okwanele ukuthi awucabangi ngokusebenzisa esinye isiphequluli okuthiwa siyiso. ISafari yakhelwe ngonjiniyela abanjengo-OS X, nokwenza ngcono okungcono kakhulu ngohlelo lonke namawebhusayithi ahlukile esingawafinyelela kunzima ukuzishaya. Ngaphezu kwalokho, zisivumela nokuthi sengeze ukunwetshwa kwesinye isikhathi kusiphequluli ngakho-ke izaba zokuthi i-Chrome ingcono ngalowo mqondo ayinangqondo ngokuphelele.
Ngaphandle kokukhula kancane iFirefox ebhekene nakho, lesi siphequluli seMac sisasebenza okunye okuhle kakhulu kwe-OS X ngemuva kweSafari, eza ifakiwe ngokwendabuko. IFirefox ibilokhu ibonakala ngokuzama ukuvikela ukuphequlula komsebenzisi ngangokunokwenzeka ngokuvimba, ngaphakathi kokungenzeka kwayo, noma yiluphi uhlobo lokufinyelela kwi-MAC yethu ngalo. Enye inzuzo esisinikezwa yiFirefox ukuzimela kwayo nobumfihlo obusinikeza kona lapho uphequlula, ikakhulukazi kumakhasi ejwayelekile wewebhu afana ne-Amazon, alandelela amakhukhi ethu ukwazi ukuthi yini esiyifunayo nokuthi ngamanani asike sawathola phambilini.
Ungayivula kanjani iTheminali ku-Mac
Esinye sezici ezikwenza kube esinye seziphequluli ezihamba phambili ze-Mac yiyona kungenzeka ukwengeza noma yiluphi uhlobo lwesandiso. Eqinisweni kuneziningi zazo ezitholakala kuphela kwiFirefox ngaphandle kokuthola uzakwabo kwamanye amapulatifomu afana ne-Chrome. Ngenxa yokuvumelanisa phakathi kwamadivayisi aneFirefox singakwazi futhi ukuba nawo wonke amabhukumaka ethu namaphasiwedi kuwo wonke amadivayisi lapho futhi sineFirefox efakiwe, kungaba yiWindows, Android, Linux ...
Landa iFirefox mahhala.
Kuze kube muva nje, isiphequluli besilokhu siyizimvu ezimnyama zama-laptops e-Mac. Ukusetshenziswa okuphezulu kwayo yonke i-ecosystem yezinhlelo zokusebenza esihlala sihlotshaniswa nayo (i-Hangouts, i-Google Drayivu ...) yenze lesi siphequluli ikhanda langempela lebhethri lethu le-MacBook. Kwakungenandaba ukuthi uvakashele liphi ikhasi nokuthi liqukethe iFlash noma cha, abalandeli beMacBook yethu bahlala bephendukela kumandla agcwele ngaphandle kwesizathu, yingakho ukusetshenziswa kwayo kuncishiswe kakhulu kuma-laptops e-Apple, hhayi kuma-desktop we-Mac lapho kusetshenziswa khona kuyinto yesibili ngoba siyazi ukuthi ngeke siphelelwe ibhethri.
Ngenhlanhla, inguqulo yakamuva ye-Chrome ye-OS X ixazulule le nkinga futhi ijubane labalandeli be-MacBook yethu lahlala emazingeni anele, kanye nokusetshenziswa kwebhethri, kepha kubasebenzisi abaningi bese kwephuzile futhi i-Chrome ayiphindanga yanyathela ama-laptops abo. . I-Chrome, njengeFirefox, isinikeza ukuvumelanisa kwamabhukhimakhi phakathi kwamadivayisi ahlukile namaphasiwedi, okwenza ukusetshenziswa kwayo kukhululeke kakhulu ngaphandle kokubhala phansi amaphasiwedi ukuwaphatha. Ngaphezu kwalokho, isitolo sohlelo lokusebenza nesandiso sinikeza inani elikhulu lezengezo Okwesiphequluli sethu, izengezo ezingathi kwesinye isikhathi zingakhiqizi njengoba zithatha ingxenye enkulu yezinsizakusebenza zeMac yethu.
Landa i-Chrome mahhala.
Kuze kube yilapho izambulo zikaSnowden nezindlela ezisetshenziswa yibo bonke ohulumeni, hhayi iNyakatho Melika kuphela, yokuhlola izakhamizi zabo zenziwe zaba sesidlangalaleni, abasebenzisi abaningi bashintshele kusiphequluli seThor. ukungashiyi mkhondo wokusesha kwakho futhi uthonywe imiphumela yosesho ngokususelwa endaweni yakho (IP).
I-Tor isuselwe kuFirefox ebuye isivumele ukuthi senze lesi siphequluli ngendlela oyifisayo size sifike ezingeni eliphezulu. Kungenzeka kakhulu ukuthi uma uvakashela amawebhusayithi anokukhangisa okuningi kakhulu nezinto ezilandelela umsebenzi wethu, isiphequluli ngeke sisebenze kahle, okuzosiphoqa ukuthi sisebenzise ezinye izici zokucushwa. Lesi siphequluli se-Mac silungele ama-troll, labo basebenzisi abathanda ukudala impikiswano emakhasini ewebhu abiwavakashelayo futhi ngokuvamile avinjelwa njalo nge-IP.
I-Tor iyatholakala mahhala ngokulanda.
Ngokwami, ngingomunye wabasebenzisi abacabanga lokho I-Opera ayikwazanga ukuzivumelanisa nezikhathi zamanje futhi ekugcineni kugcine ngezimali eziphansi kakhulu zomsebenzisi uma kuqhathaniswa neminyaka edlule. Ukuntuleka kwezinketho zokumisa, ngaphezu kokusebenza kwayo okungafanele kwesinye isikhathi, kwenze umphakathi uyeke ukuyisebenzisa.
I-Opera futhi isivumela ukuthi sifake izandiso ukwenza ngezifiso ukuzulazula kwethu kanye ne izidingo eziphansi ukuze zisebenze kahle ziphansi kakhulu. Inketho enhle yemishini engenamandla kangako.
I-Opera iyatholakala mahhala uma ungayilanda.
IMaxthon iyindlela enhle uma ufuna ukuzama esinye isiphequluli. Akusiniki lutho oluvela kokujwayelekile, esivumela ukuthi sivumelanise idatha yethu yokuphequlula namanye amadivayisi, sigcine amaphasiwedi, izinkambu zokugcwalisa ngokuzenzakalela ... Udaba lwezandiso alusebenzi ngendlela efanele njengoba lusivumela kuphela ukufaka ezimbalwa zezitolo zeFirefox neChannel. Lapho lesi siphequluli seMac sigqame khona kuzidingo ezidingekayo ukuze zisebenze, ngoba ngokungafani ne-Chrome ngezikhathi zayo ezimbi, iMaxthon ayidingi izidingo eziningi ezivela kwi-Mac yethu.
IMaxthon iyatholakala mahhala nge-Mac App Store.
Isiphequluli esisuselwe ku-Chromium, njenge-Chrome. Le yi isiphequluli esingcono kakhulu se-Mac esingasithola sokusetshenziswa kwamavidiyo nomculo, kepha isebenza ikakhulukazi lapho sigxila ekudlaleni umculo ngesiphequluli. Kusivumela nokuthi silande amavidiyo esiwadlalayo esipheqululini ngaphandle kokufaka esinye isandiso sengathi senzeka ku-Chrome. Iphinde ihlanganise umphathi ofanele wesifufula wabathandi bokulanda. Njengoba isuselwa kuChromium, iTorch ivumela ukufakwa kwazo zonke izandiso ezitholakala kuWebhu ye-Chrome Store.
Ukusetshenziswa kwezandiso, njengoba ngishilo ngenhla, kufanele kwenziwe ngokulinganisela noma kungenjalo singenza isiphequluli sibe umnyuzi onzima wokuhamba kunoma iyiphi i-Mac, ngaphandle kokucushwa kwaso. Izaziso zethoshi ikakhulukazi lapho sifaka izandiso ezingaphezu kwezine. Isiphequluli sokuthinta siyatholakala mahhala.
Inkohliso yisiphequluli se-Mac leso kwenza ezishintshayo kube lula. Inkohliso isivumela ukuthi sihudule izenzo zesiphequluli ukudala ukugeleza kokusebenza okucacile ngaphandle kwesidingo soxhumano lomuntu. Ukuhamba komsebenzi okudaliwe kungagcinwa futhi kwabelwane ngakho nabasebenzisi abaningi. Inkohliso iphefumulelwe yi-Automator evela ku-OS X futhi iyinhlanganisela ephelele yeSafari ne-Automator esivumela ukuthi sihlanganyele ne-inthanethi ngokushesha nangokunethezeka.
Inkohliso ilungele abasebenzisi abaphambili njengoba izobavumela shintsha imisebenzi lapho ugcwalisa amafomu amade nokubanjwa kwesithombe. Zonke izici ze-Fake's automation zinikwe amandla yithuluzi lokubhala le-AppleScript le-Mac OS X, evumela ukuthi ukubhala okuzenzakalelayo kungezwe kweminye imisebenzi ejwayelekile yomugqa womyalo.
Lesi siphequluli, ngokusobala, ayitholakali mahhala, ibizwe ngo- $ 29,95, kodwa singakwazi landa inguqulo yamahhala ukubona nokuhlola ukusebenza kwayo.
I-Yandex, odabuka eRussia, iyisiphequluli sesikhondlakhondla sosesho i-Russian i-Yandex, abakaze bazihluphe ngokushintsha igama kube sengathi i-Google yenza ngokubiza isiphequluli sayo ngokuthi yi-Chrome. I-Yandex yaziwa ngokuba ngesinye seziphequluli esisheshayo se-Mac esingayithola emakethe, isivikela kumawebhusayithi ayingozi aqukethe i-malware futhi ivikele futhi isazise lapho sixhuma kwinethiwekhi yomphakathi ye-Wi-Fi, ukuze sinakekele imininingwane esiyifakayo.
Mayelana nokwenza ngokwezifiso, I-Yandex isivumela ukuthi senze ngezifiso isizinda sesiphequluli ukuyivumelanisa nokuthanda kwethu, okuthile iziphequluli ezimbalwa kakhulu ezingakunikeza njengamanje. Njengezinye iziphequluli eziningi, futhi isinikeza nethuba lokuvumelanisa isiphequluli sethu nedatha yokungena ngemvume namanye amadivayisi, ngoba i-Yandex iyatholakala nge-iOS ne-Android.
I-Yandex iyatholakala mahhala.
Unjiniyela weSleipnir Browser uthi basidale lesi siphequluli ngomfanekiso nangokufana nokuthi ungathanda kanjani ukuthi bekuyisiphequluli sakho osithandayo, izithonjana zamakhasi osayizi abafanele ukubonakala ngaphandle kokushiya amehlo ethu, izinkambu zokusesha ngezinketho, kulula ukuthola ithebhu evulekile oyidingayo ngaleso sikhathi ...
ISleipnir yakhelwe ukuthi ikwazi ukukwenza lawula ukuzula ngokuthinta ku-Track Pad noma kwi-Magic Mouse, sishiya eceleni ukunyakaza okujwayelekile okuya phezulu naphansi ukuzungeza ikhasi esivakashelayo. Inezinqamuleli zekhibhodi ukusheshisa ukuzulazula, ukuze igundane lingadingeki ngisho nokukwazi ukuzulazula ngokunethezeka. Lesi siphequluli sisinikeza ithuba lokuvula amathebhu ahlukahlukene afika ku-100, okungukuthi uma ukusebenza njengoba uvula amathebhu kuncipha kakhulu.
I- "Vivaldi" ingesinye seziphequluli zakamuva ze-Mac, kodwa-ke, inolwazi olunzulu njengoba yathuthukiswa yinkampani iVivaldi Technologies, eyadalwa ngumsunguli kanye nowayengumphathi omkhulu we "Opera" (isiphequluli esesibonile ngenhla ) UJon Stephenson von Tetzchner.
Isiphequluli se-freeware esinokuthinta "okuphendulayo" njengoba kuvela njengokusabela kwenguquko eyenziwe yi-Opera isuka ePresto iya eBlink, yingakho isiqubulo sayo samanje sithi "Isiphequluli sabangane bethu".
"I-Vivaldi" yisiphequluli sewebhu seMac esenzelwe labo basebenzisi abachitha amahora amaningi bephequlula inetha, ngakho-ke sichazwa ngokuthi “Siqu, siyasiza futhi siguquguquka”, Futhi iqiniso ukuthi kunjalo. Isibonelo, unga khetha indawo yamathebhu phezulu, phansi noma kolunye uhlangothi, futhi unganquma ngisho ne- indawo yebha yekheli. Ngaphezu kwalokho, unga futhi ngezifiso ukushukuma komzimba ngegundane, ukubukeka, izinqamuleli zekhibhodi nokunye okuningi
Phakathi kwemisebenzi nezici zayo ezivelele kakhulu singasho ukuthi inikeza enye yezindlela zomlando ezinamandla kakhulu ngezibalo zokusetshenziswa ezethulwe ngendlela ebonakalayo, ikhono lokudlulisa amehlo kalula kumawebhusayithi futhi uthole izixhumanisi, nokunye okuningi. Ibuye ibe nosizo iphaneli yamanothi lapho unganamathisela khona umbhalo owuthanda kakhulu, engeza isixhumanisi nemifanekiso, enamandla umphathi webhukhimakhi lokho kuzosiza ukusetshenziswa kwayo kungakhathalekile ubuningi, umsebenzi "Ukunqwabelana kwamathebhu", njll.
Ungalanda iVivaldi ye-Mac ngokuphelele mahhala kuwebhusayithi yayo esemthethweni.
I-Rockmelt, isiphequluli semidiya yokuxhumana nabantu
"I-RockMelt" isiphequluli se-Mac esenzelwe ngokukhethekile labo basebenzisi abadlulisa amehlo kakhulu kumanethiwekhi abo omphakathi, ikakhulukazi kuFaceBook. Ngokuya ngesiphequluli se-Chrome se-Google, i-RockMelt inenzuzo ye- ukuhlanganiswa kwezokuxhumana nezilawuli ezikhethekile ukuze abangane bakho "bavale" amahora angama-24 ngosuku. Kubandakanya ne ibha yokuxoxa, kungenzeka ukwengeza ukuxhumana nomphakathi, ukuvuselela isimo sakho ngqo kusuka kuzilawuli zayo zendawo nokunye okuningi.
Njengoba sishilo, yisiphequluli esisuselwa ku-Chrome ngakho-ke sifaka wonke amandla, ukusebenza nemisebenzi yaso, ngenzuzo yokuba amanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi ahlanganiswe.
Ungalanda i-RockMelt ye-Mac mahhala lapha.
"Umhlambi" isiphequluli sewebhu esenzelwe amapulatifomu amaningi, kufaka phakathi i-Apple's Mac. Njengenjini yemidwebo isebenzisa iGecko, efanayo naleyo esetshenziswe kwiMozilla Firefox, futhi inzuzo yayo noma isici esivelele kunazo zonke ukuhlanganiswa okunamandla nezinsizakalo ezibalulekile njenge-Facebook, Twitter, Flickr noma i-YouTube. Ngale ndlela, abasebenzisi boMhlambi bangaziqhayisa ngokufinyelela okusheshayo nokuqondile kunoma iyiphi yalezi zinsizakalo.
Enye yezinto zayo ezivelele yi- umhlambi eseceleni, kangangoba ingachazwa njengensika enkulu yalesi siphequluli sewebhu. Kuyisikhala lapho abasebenzisi banokufinyelela okuqondile kokuphakelayo kwabo kwe-RSS nezintandokazi.
Kepha akupheleli lapho ngoba Umhlambi une:
Ikhono lokubhala okuthunyelwe okusha kwama-blog namawebhusayithi ku-WordPress, Livejournal noma ku-Blogger noma ngabe ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngaleso sikhathi.
Unamandla ibhodi yokunamekas on-line lapho ungagcina khona imibhalo, izixhumanisi, izithombe ezifanele ukuthi uthinte noma uzisebenzise ngokuhamba kwesikhathi.
Inketho yamandla yabelana ngezithombe ku-Facebook noma kuFlickr ngaphandle kokushiya isiphequluli.
Ungalanda i-Flock Web browser mahhala lapha.
Lapha unochungechunge oluhle lwezinye izindlela lapho upheqa iwebhu njengokujwayelekile okufakwa yi-Apple kumakhompyutha ayo e-Mac, kusuka kokunye okuhlonishwayo nokudumile njengeFirefox, i-Chrome noma i-Opera, kwabanye okungaziwa kangako kepha okunomklamo omncane, onembile futhi ogcwele imisebenzi , amandla nokusebenza, njengoVivaldi noma uTor. Manje uyakhetha, ukhetha muphi?
Eminyakeni embalwa edlule besinokuhlukahluka okukhulu, kepha iziphequluli eziningi ziyekile ukuvuselela njenge- Camino, abanye bathanda I-Rockmelt ithengwe yi-Yahoo, Umhlambi Ishintsha izinhloso zayo zamasu futhi asazi nokuthi izobuya nesiphequluli sayo seMac. Isiphequluli Sokuphuma Kwelanga iphelile ngokuqondile futhi okwamanje ayinayo iwebhusayithi.
Ngabe ungangeza okunye kulolu hlu? Yini ngawe isiphequluli esihle kakhulu se-Mac?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » Isiphequluli se-Mac
Ngokwami, ngike ngazama iziphequluli eziningi kwi-MacBook Air yami, engiyithande kakhulu yiCrome ngenxa yokuhunyushwa kwayo, kepha kungekudala nje bekumele ngibuyele eSafari, ngenxa yezenzo ezithinta iningi leCrome.
UMiguel Angel Juncos kusho
Ngiyavuma ngokuphelele. I-Chrome iphakeme ngezindlela eziningi, kepha ukuthinta okwakhelwe ngaphakathi kokuthinta okuningi kwe-Safari kuyigugu. Ngiyakuthanda ukugijima iminwe emibili ku-trackpad ukuya emuva, ngokwesibonelo.
Phendula uMiguel Ángel Juncos
ofileyo wakho kusho
Kusukela namuhla, isici siyatholakala futhi i-chrome isidlule i-safari ku-mac. Ufudu seludlulile kunogwaja.
Phendula abafileyo bakho
Ngisebenzisa iFirefox neThunderbird nge-imeyili ku-Mac naku-PC. Ukuphela kwendawo engisebenzisa iSafari nge-iPad. Izizathu? Ukwethemba, ukuphepha, ukwenza ngokwezifiso. Angithembi lutho, kepha akukho lutho nge-Chrome noma i-Big Brother Google nokulangazelela kwayo ukuthola idatha ethe xaxa ngaphandle kwakho ukwazi.
Chafic bg (@chaficbaw) kusho
Mhlawumbe umuntu angagijima ngokushesha okukhulu kunenye, kepha ukusetshenziswa "kokuthinta" nge-trackpad kuyinto yesibili kuya kweyodwa, umuzwa omuhle kakhulu wokuphequlula. imikhonzo ngiyabonga ngenothi.
Phendula ku-Chafic BG (@chaficbaw)
ungasifaka isiphequluli se-Russian Sputnik kwi-Mac?
Sawubona, nginombuzo. I-Chrome ayisabuyekezi i-Mac yami ngakho-ke kunamakhasi amaningi engingakwazi ukuwafaka. Uhlelo lwami lokusebenza lumi kanjena: OS X 10.8.5. Ngeke ingivumele ngiyivuselele, noma ngifake iFirefox ... Futhi angazi ukuthi kungani iSafari ingangisebenzeli nami! 🙁
Kwenzeka into efanayo kimi futhi angazi ukuthi ngingayixazulula kanjani, ngabe ukwazile ukwenza okuthile? ukubingelela
Uyazi ukuthi ngabe kukhona injini yokusesha ye-meta ehambisanayo ye-Mac?
IFirefox Quantum (inguqulo 57) ingunaphakade!
U-Anne Swan kusho
Angisakwazi ukuvula amakhasi amaningi ku-Mac yami kunakuqala futhi ngine-safari, yini engingayenza?
Phendula u-Anne Swan
Bengingazi ezimbalwa zohlu, kuzofanele ngizizame ngoba angisayithandi iSafari ngendlela ebengijwayele ...
Uma ufuna imininingwane engaphezulu kukhona enye iwebhusayithi enezindatshana eziwusizo kakhulu ezikhuluma ngalokhu. http://www.descargarotrosnavegadores.com
Ngiyethemba omunye umuntu uzoba wusizo, ngiyabonga nokuzithoba okuhle!
Izinzuzo nezinkinga ze-Apple Watch ene-LTE